Mawjadaha kuleylka dila waxay noqon doonaan kuwo soo noqnoqda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Mawjadaha kuleylka
Isbeddelka cimilada ayaa marba marka ka dambaysa sii muuqata, ka sii waxyeello badan, saamaynteeda ayaa ka sii daran oo ka sii daran, si kastaba ha noqotee, dadaallada lagu yareynayo lama fulin, ama ugu yaraan kuma filna sidii la rabay.
Sida aan ognahay munaasabadaha kale, isbedelka cimilada wuxuu kordhiyaa soo noqnoqoshada iyo xoojinta hirarka kuleylka iyo abaaraha, Si kastaba ha noqotee, warbaahinta kama maqalno erayga "isbeddelka cimilada" ama "diirimaadka adduunka", laakiin waxaan ka hadlaynaa oo keliya kulayl aad u daran ama sii raagaya. Maxaa dhacaya haddii ay sidan sii socoto?
1 Mawjadaha kuleylka ayaa kordha
2 Dhimasho iyo kuleyl badan
Mawjadaha kuleylka ayaa kordha
Is-beddelka cimilada adduunka iyo isbeddelka cimilada ayaa inta badan dhaca iyadoo ay ugu wacan tahay kororka qiiqa hawada lagu sii daayo ee ay dadku sii daayaan tan iyo kacaankii warshadaha. Waxaa lagu qiyaasaa in 74% dadka adduunka ay la kulmi doonaan mowjado kuleyl dilaa ah sanadka 2100. Tan waxaa lagu qiyaasayaa cabirro ay sii deynta gaaska sii wado inay ku sii kororto isla heerka ay hadda sameyso. Tan waxaa lagu daabacay joornaalka Ingiriiska ee Nature.
Cilmi-baarista, oo ay soo saartay Jaamacadda Hawaii (USA), ayaa saadaalineysa, xitaa haddii qiiqaasi si aad ah loo dhimay, ku dhowaad 48% dadweynaha waxaa saameyn ku yeelan doona kororka degdegga ah ee heer kulka. Sidan oo kale, waxaan ku daalaynaa xulashooyinkayaga mustaqbalka. Maalmahan, hirarka kuleylka ayaa waxyeello weyn u leh qayb weyn oo ka mid ah dadweynaha (gaar ahaan waayeelka). Taasi waa sababta, haddii aan sidan ku sii socono, fursadaha aan ku khasbanaan karno inaan iska caabinno hirarka kuleylka ayaa sii yaraan doona.
Mawjadaha kuleylka ayaa kumanaan qof u dhinta adduunka sanad kasta. Dhibaato weyn oo la xiriirta hirarka kuleylka waa abaar. Kulaylka aan haysanno iyo saacadaha qorraxda ee badan, ayaa biyo badan uumi baxaan oo ay yaraanayaan ilaha biyaha ee aan haysanno. Marka saameynta hirarka kuleylka ayaa aad uga weyn markii ay jiraan abaaro.
Haddii qiiqa gaaska lagu sii daayo uu ku sii socdo heerkan, celceliska heer kulka adduunka ayaa sii kordheysa marba marka ka dambeysa mana jiri doono heshiis Paris ah oo joojin kara.
“Jirka bini’aadamka wuxuu ku shaqeyn karaa oo keliya gudaha cimilo yar oo heerkulka jirka ah oo qiyaastii ah 37 digrii. Mawjadaha kuleylka ayaa khatar weyn ku haya nolosha aadanaha maxaa yeelay heerkulka sare, oo ay sii xumeyneyso qoyaanku, wuxuu sare u qaadi karaa heerkulka jirka wuxuuna abuuri karaa xaalado noloshaas khatar gelinaysa”, Ayuu ku daray Mora, oo ka mid ah khubarada gacanta ku haysa daraasaddan.
Maaddaama heer-kulka ugu fiicani yahay 37 digrii, dheef-shiid kiimikaadkeenu ma kala diri karo kuleylka la soo saaray markii heer-kulka deegaanku ka sarreeyo 37 digrii. Sidaa darteed, heer kulka noocan oo kale ah waa khatar caafimaad, maadaama kuleyl soo kordha uu ka dhici karo jirka gudihiisa kaasoo sababa waxyeello.
Dhimasho iyo kuleyl badan
Daraasadu waxay sameysay baaritaan dhamaan dhimashooyinka sababay dhacdooyinka hirarka kuleylka ilaa 1980. In kabadan 1.900 kiis ayaa lagu aqoonsaday meelo kaladuwan oo adduunka ah halkaasoo heerkulka sare uu sababay dhimasho. Waxaa jiray 783 hirar kuleyl halis ah waxayna heleen marin heer kulka iyo huurka taas oo, halkaa laga bilaabo, saameynta caafimaadku ay le'eg tahay. Aagga meeraha ee xaaladaha cimilada ay ka gudbaan xadkaas 20 maalmood ama ka badan sanadkii ayaa korodhay sannadihii la soo dhaafay, saynisyahannaduna waxay rumaysan yihiin inay sii wadi doonto koritaanka xitaa haddii qiiqa gaaska lagu sii daayo la yareeyo.
Tusaalooyinka ay bixiyeen khubaradu waxaa ka mid ah kulaylkii ku dhuftay Yurub 2003 oo sababay ku dhowaad 70.000 oo dhimasho, midkii saameeyay Moscow (Russia) ee 2010 oo dilay 10.000 qof ama tii Chicago ee 1995 , oo gaadhay 700 oo dhimasho ah. Waqtigan xaadirka ah, Qiyaastii 30% dadka adduunka ayaa sannad kasta la kulma xaaladahaas halista ah.
Tani waa ta keenta isbeddelka cimilada oo mar kasta oo dadaallada lagu yareynayo ay ka yar yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Mawjadaha kuleylka dila waxay noqon doonaan kuwo soo noqnoqda
Sidee bay aerosolku saameyn ugu yeeshaan cimilada adduunka?
Xilliga xagaaga ayaa si gaar ah ugu kululaan doona badda Mediterranean